Zvakazarurwa 13 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku raZvakazarurwa 13:1-18
Chikara chine misoro minomwe chinobuda mugungwa (1-10)
Chikara chine nyanga mbiri chinobuda muvhu (11-13)
Mufananidzo wechikara chine misoro minomwe (14, 15)
Chiratidzo nenhamba yechikara (16-18)
13 Iyo* yakamira pajecha regungwa. Uye ndakaona chikara+ chichibuda mugungwa,+ chiine nyanga gumi nemisoro minomwe; panyanga dzacho paiva nekorona gumi, asi pamisoro yacho pakanga paine mazita ekumhura. 2 Chikara chandakaona chakanga chakaita sembada, asi makumbo acho akanga akaita seemhuka inonzi bheya, muromo wacho wakanga wakaita seweshumba. Dhiragoni+ yakapa chikara masimba nechigaro chacho cheumambo nesimba racho guru.+ 3 Ndakaona kuti mumwe musoro wacho waiita sekunge wakuvadzwa zvekufa, asi ronda rawo rinouraya rainge rapora,+ uye nyika yese yakatevera chikara chacho ichichiyemura. 4 Vakanamata dhiragoni nekuti yakapa chikara simba, uye vakanamata chikara nemashoko ekuti: “Ndiani akafanana nechikara, uye ndiani angarwa nacho?” 5 Chakapiwa muromo waitaura zvinhu zvikuru uye zvekumhura, uye chakapiwa simba kuti chirishandise kwemwedzi 42.+ 6 Chakashama muromo wacho chichimhura+ Mwari, kuti chimhure zita rake nenzvimbo yake yaanogara, kunyangewo vaya vanogara kudenga.+ 7 Chakabvumirwa kurwa nevatsvene uye kuvakunda,+ uye chakapiwa simba pamusoro pemadzinza ese nevanhu nendimi* nemarudzi. 8 Vanhu vese vari panyika vachachinamata. Kubvira pakuvambwa kwenyika, hapana zita remumwe wavo rakambonyorwa mugwaro* reupenyu+ reGwayana rakaurayiwa.+ 9 Kana paine ane nzeve ngaanzwe.+ 10 Kana paine anofanira kutapwa, achatapwa. Munhu achauraya mumwe nebakatwa,* achaurayiwawo nebakatwa.+ Pano ndipo panoda kuti vatsvene+ vatsungirire+ uye vave nekutenda.+ 11 Ndakabva ndaona chimwe chikara chichibuda pasi pevhu, uye chaiva nenyanga mbiri dzakafanana nedzegwayana, asi chakatanga kutaura sedhiragoni.+ 12 Chinoshandisa simba rese rechikara chekutanga,+ chikara chacho chekutanga chichiona. Uye chinoita kuti nyika nevanhu vari pairi vanamate chikara chekutanga, chaiva neronda rinouraya rakazopora.+ 13 Chinoita zviratidzo zvikuru, chichitoita kuti moto udzike panyika uchibva kudenga, vanhu vachizviona. 14 Chinotsausa vaya vanogara panyika nezviratidzo zvachakabvumirwa kuti chiite chichionekwa nechikara chekutanga, chichiudza vaya vanogara panyika kuti vagadzire mufananidzo+ wechikara* chakanga chiine ronda rebakatwa asi chikazorarama.+ 15 Chakabvumirwa kuti chipe mweya wekufema* kumufananidzo wechikara, kuti mufananidzo wechikara utaure uye uurayise vese vanoramba kunamata mufananidzo wechikara. 16 Chinomanikidza vanhu vese, vakuru nevadiki, vapfumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kuti vaiswe chiratidzo paruoko rwavo rwerudyi kana kuti pahuma dzavo,+ 17 uye kuti parege kuva nemunhu anotenga kana kutengesa kunze kwekunge aine chiratidzo, zita+ rechikara kana nhamba yezita racho.+ 18 Pano ndipo panodiwa uchenjeri: Munhu ane ungwaru ngaaongorore kuti nhamba yechikara ndeipi, nekuti inhamba yemunhu; uye nhamba yacho i666.+
^ Kureva, dhiragoni.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Kana paine anofanira kuurayiwa nebakatwa.”
^ ChiGir., “vagadzirire chikara mufananidzo.”
^ Kana kuti, “mweya.”